mubvunzo Convair 990A & FSX
2 makore 4 ago #155 by FCAIR
Ndiri Big chaizvo Fan of Convair 880 & 990. vanga vachiedza kuwana munhu akagadzwa ane VC anoverengeka Mwedzi pasina nemhanza. Ko munhu ane 880 kana 990 aine VC kuti vaizova vachida kugoverana. I vakaedza kuisa HJG convairs asi havana kuratidza mune mutambo. Mushure vakaedza kakawanda kuwana navo kubasa Ini pakupedzisira vachangobva mapfumo sezvo vasina munhu VC zvakadaro. Rimwe zuva ndakawana rimwe pamusoro Virtual Airline nzvimbo kupendwa mukutanga 60 kuti AA Paint zvinoratidza kumusoro mutambo asi hapana VC. Handisi guru faira mukomana achiri kudzidza asi ndaona namagwatidziro pamusoro kuwedzera VC kuti ndege navo saka ndakanga chete kushamiswa kana munhu pano unoziva kuita izvi kana anogona kutungamirira neni apo ndinogona kudzidza nzira iyi. Kutenda mberi
2 makore 4 ago #156 by douglasjaen
2 makore 4 ago #158 by Gh0stRider203
OK kupi iwe kuwana runako ichi ??? Ndinofanira kuwedzera naye muunganidzwa My!
Kana dambudziko VC, I nokutendeseka handizivi murume. Handina kumbobvira nokutendeseka zvichizivikanwa kukuchidzira pamusoro VC kana zviri CS C-130 kana 707
2 makore 4 ago #159 by Gh0stRider203
Lemme pambiru ari FB Group Ndiri .... pamwe nemumwe vachaziva!
2 makore 4 ago #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html Ndimo ndakawana dhanilodhi kubva.
2 makore 4 ago #164 by Gh0stRider203
Ya munoziva ... ndaigona kushandisa mashoma vezvikepe zvakanaka kana uchida
2 makore 4 ago #166 by FCAIR
Ini ndiri tsvarakadenga itsva FSX handidi funga ndiri mutyairi akanaka panguva ino. Asi ini ndiri kuda kuita chinhu sezvo ini mberi mune sim. Uye American wangu Favorite Airline ivavo vokutanga ndege uye pendi. Never Ziva ..
2 makore 4 ago #167 by Gh0stRider203
chero unogona kuwana kubva padanho rimwe kukuratidza b, uye anogona kutsvoda runway pamusoro kumhara, uri wakanaka elnaz. iye zvino mukuru ndege tine ari Boeing Clipper 314 wechipiri mukuru aizova 707
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: FCAIR
Time chokusika peji: 1.196 mumasekonzi